Ala ịkpa: njirimara, ihe na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọzara ihu igwe
Otu n'ime ihu igwe dị na mbara ụwa nwere ọnọdụ kachasị njọ bụ ihu igwe ọzara. Ihe e ji mara ya karịsịa bụ ịnwe nnukwu akụkụ nke ụkọ mmiri ozuzo kpatara ụkọ mmiri ozuzo kwa afọ. Ọ bụ ụdị ihu igwe ebe usoro mkpofu ikuku na oke okpomọkụ na-achị. E mepụtala usoro okike ndị a kemgbe ọtụtụ afọ site na ọnọdụ ihu igwe dị iche iche nke mepụtara njirimara ndị a pụrụ iche.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido na mkpa ịdị n’ọzara.
1 Ọzara ihu igwe
3 Ihe igwe ikuku
Na ihu igwe ọzara, usoro ikpochapu ikuku na-achi. Ọ bụ nkwụsị nke mmiri nke a na-ede n'elu n'elu n'ihi ikuku nke ikuku na-akpata site na radieshon nke anyanwụ na ụba okpomọkụ. A gbakwunyere obere igba ajirija nke dị site na mmiri nke osisi. Ihe puru iche nke evapotranspiration na eme ka oke mmiri ozuzo di na a dị ala dị ala n'afọ niile. Kpụrụ na-adịgide na 250 mm kwa afọ. Ọ bụ data ma ọ bụ dị ụkọ, nke na-egosi enweghị ahịhịa na iru mmiri na gburugburu ebe obibi. Otu n'ime ebe kachasị amara amara na mbara ala dịka ọmụmaatụ nke ọnọdụ ihu igwe ọzara bụ Sahara.
Usoro evapotranspiri a na-emekwa n'ihi nhazi nke enyemaka dị. Ọ ga-ekwe omume na ụfọdụ ọzara ndị dị nso n’oké osimiri na-asọ oyi na-amachi ma ọ bụ na-egbochi ọfụfụ, si otú a na-emebi ọ̀tụ̀tụ̀ iru mmiri zuru ezu. Ihe ndị anyị kwuru banyere ha bụ ihe ndị na-eme ka mmadụ na ibe ya nwee mmekọrịta dị iche iche dịka oke osimiri.
A na-ahụkarị ihu igwe ọwụwa dị n'akụkụ ebe okpomọkụ. Ulo ebe a na achota otutu ohia di gburugburu 15 na 35 degrees. N’ebe ndị a niile, e nwere ụdị osisi na ahịhịa na ahịhịa nke emerela ka ọnọdụ kacha njọ. Speciesdị ndị a na-emepụta mgbanwe maka ụzọ ndụ a ruo ọtụtụ puku afọ site na usoro evolushọn. Ha aghaghị imeghari site na ịmepụta ụfọdụ njirimara iji nwee ike ịlụ ọgụ na enweghị mmiri na mgbanwe ọkụ.
Mgbe anyị na-ezo aka na ụfọdụ ọzara, enwere ike jikọta ya na oke aja na oke ọkụ. Otú ọ dị, a mbara ihu igwe ihe efekarị na ihu igwe nwere ike ịzụlite n'ụzọ zuru okè na Antarctica na n'ebe ugwu arctic. Ma ọ bụ na ihu igwe ọzara abụghị naanị na ọzara gụnyere, mana ọ dabere na iru mmiri.
Ofdị ihu igwe nwere ike ime na mpaghara oyi ebe ọ na-anata obere iru mmiri ma nata ya dị ka snow. Ekwesiri iburu n'uche na mmiri ozuzo na ala ndia na eme otutu oge, nke mere na o gosiputa onwe ya dika oke ikuku. Mgbe usoro mmiri zoo, iyi na ala jupụta na mmiri n'ihi na ha enweghị oke ọ bụla. Ọ bụ mgbe ahụ ka mmiri dị n’elu ala na-ekere òkè dị mkpa na nkesa mmiri. Mmiri ozuzo a na-adịgide naanị awa ole na ole ma otu ihe ahụ na-eme na oke mmiri. N'iburu oke okpomọkụ na ụdị ala, mmiri na-ekpokarị ọkụ ngwa ngwa.
N'etiti njirimara nke ihu igwe ọzara pụtara na anyị enweghị enweghị iru mmiri. Ọ bụ njirimara bụ ihe kacha pụta ìhè n'ụdị ihu igwe a. Ikpọ oku na-ebute ụzọ na ebe ndị a. Ọ bụghị naanị na ala kpọrọ nkụ, kamakwa ikuku. Ọtụtụ mpaghara nwere ihu igwe ọzara nwere oke pasent nke evaporation karịa mmiri ozuzo. Ihe niile a na - eduga na ngbanye mmiri. N’ọzara ụfọdụ na-ekpo ọkụ, mmiri na-enwe ike ịpụ n’afọ tupu ya erute. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ezigbo mmiri ozuzo na-eme, ha na-ewekarị igbawa osisi na anụmanụ. N'ihi nke a, enwere ike ịtụle ụfọdụ ọzara ndị na-adịchaghị mma.
Okpomọkụ na oyi bụ àgwà abụọ ọzọ na-eme ka ihu igwe ọzara pụta ìhè. Ma ọ bụ na ọ bụ ezie na ụfọdụ ọzara ka dị otu a na afọ niile, ebe ndị ọzọ kpọrọ nkụ nwere oge oyi na udu mmiri. Enwekwara ọzara nke nwere oscillation na-ekpo ọkụ kwa ụbọchị n'etiti ehihie na abalị. N'agbanyeghị ihe ndị a niile, oge udu mmiri a na-enwe n'oge oyi anaghị abịaru oyi. Ya mere, ọ bụ ezie na e nwere abalị ndị oyi na-atụ, ebe ọ bụ na ọ dịghị ahịhịa iji lekọta okpomọkụ a na-enweta n'ehihie, a dịghị edekọ ụkpụrụ dị ala dị otú ahụ.
Ha banyere n'usoro ihe a niile, onye njem nke na-akwadoghị enweghị ike igosi ya ihu igwe ebe ọ nwere ike ịpụta n'ihi ọkụ ọkụ n'oge ụbọchị ma ọ bụ nwụọ nke hypothermia n'abalị.
Ihe igwe ikuku
Na ụdị ihu igwe evaporations dị ukwuu karịa precipitations. Ọnụego nke evaporation nwere uru dị elu karịa nke ọdịda. Nke a bụ ihe na - eme ka ala ghara ikwe ka gestation nke ndụ osisi. Na mpaghara nke Middle East ha nwere nkezi nke 20 centimeters nke mmiri ozuzo kwa afọ. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ nke evaporation karịrị 200 centimeters. Nke a pụtara na ọnụego evaporation dị ihe ruru ugboro 10 karịa ọnụọgụ ọdịda. N'ihi nke a, iru mmiri dị oke ala.
Nkezi nke okpomọkụ ndị a efekarị na mpaghara a 18 degrees. Ọnọdụ okpomọkụ a na-agbanwe 24 awa n'ụbọchị. Nwere ike ịchọta ụkpụrụ ruru ogo 30. Osisi mmiri niile bụ n'ihi enweghị ahịhịa nke nwere ike ịhazi okpomọkụ nke ọma. Ya mere, ala na-ekpo ọkụ n’ehihie ma na-ajụkarị oyi n’abalị.
Banyere mmiri ozuzo, ọ bụghị naanị na ha dị ụkọ mana ha na-adịghịkwa agbanwe agbanwe. Ọnọdụ a niile bụ n'ihi mmetụta na-aga n'ihu mana a na-akpọ anticyclones nke ebe okpomọkụ. Na mpaghara ndị kpọrọ nkụ, enwere ọnwa ọkọchị mana ha nwekwara ọnwa udu mmiri. N'ọzara, ọnwa ọ bụla n'afọ ha na-anọrọ. Mmiri ozuzo, mgbe ọ na-adị, na-abịa dị ka oké mmiri ozuzo. Mmiri ndị a na-erikarị osimiri ọzara nke a na-akpọ wadis. N'agbanyeghị eziokwu ahụ na mmiri ozuzo bara ụba, ọ bụ ezie na ọ dị mkpụmkpụ, ha anaghị erute n'oké osimiri ebe ọ bụ na ha kpọrọ nkụ tupu ha emechaa njem ahụ. Wadis na-anọkarị kpọrọ nkụ ọtụtụ afọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihu igwe ọzara na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ọzara ihu igwe